Njikọ na akụrụngwa mpụga - IntegritySyndicate.com
Mbido Ngwa ọrụ Njikọ njikọ weebụsaịtị
Ozi nke Ịdị n'otu nke Akwụkwọ Nsọ
Njikọ Ozizi Ndị -ozi
Nnyocha ederede / Akụkọ Ndị Kraịst
Njikọ na ihe mpụga na weebụsaịtị.
Njikọ njikọ Akwụkwọ Nsọ
Revised English Version® (REV®) bụ ntụgharị asụsụ Bible ọgbara ọhụrụ nke Spirit & Truth Fellowship International mepụtara. A sụgharịrị REV site na echiche mmụta okpukpe otu akụkụ Akwụkwọ Nsọ ma nwee ọtụtụ nkọwa mgbe ị na -ekwu maka amaokwu.
Otu Chineke ahụ, Nna ahụ, Na mmadụ Mesaịa Nsụgharị (Agba Ọhụrụ)
Nsụgharị Agba Ọhụrụ nke Akwụkwọ Nsọ nke Sir Anthony F. Buzzard. Uru pụrụiche nke ntụgharị asụsụ a dị na ntinye ya na ndetu ya, nke edoziri iji dozie nghọtahie juru ebe niile nke ọdịnala na-emebeghị akwụkwọ nsọ kpatara. Ụfọdụ nsụgharị oge a na -eji ntụgharị asụsụ ndị ọzọ dị ka ederede isi.
Weebụsaịtị Unitarian Bible nwere ọtụtụ akụkọ na akụrụngwa.
Ọwa YouTube YouTube nke Akwụkwọ Nsọ
Mmụọ Mmụọ & Eziokwu International
SPIRT & TRUTH bụ usoro mmụta zuru ụwa ọnụ, mgbasa ozi, ọtụtụ ọmụmụ na -enyere ndị mmadụ aka ịdị ka Kraịst ọnụ site na vidiyo, pọdkastị, akụkọ, blọọgụ, ịkparịta ụka n'Ịntanet, ntụgharị Bible na ọrụ nkọwa, ebe mmụta mmụta mebere, mkpakọrịta n'ịntanetị na mpaghara, mpaghara na ihe omume mba, na ndị ọzọ.
Nkuzi na akụrụngwa nke Akwụkwọ Nsọ
Ọ raara onwe ya nye iji nwetaghachi nkwenye nke ndị na-eso ụzọ Jizọs na narị afọ mbụ, Mezaịa ahụ. Tọrọ ntọala site Onye isi ala Anthony Buzzard, Bt., MA (Oxon.) MA Th. n'afọ 1981
Mweghachi Mkpakọrịta ọwa YouTube
Onye ọ bụla n'ime isiokwu anyị nwere ngalaba webụsaịtị nke juputara na akụkọ, vidiyo, ọdịyo na atụmatụ ndị ọzọ site n'aka ụfọdụ ndị edemede na ndị na -ekwu okwu n'etiti ndị otu Chineke kwere ekwe taa.
Ịchọgharị ihe Akwụkwọ Nsọ na -ekwu gbasara otu Chukwu na etu ọ ga -esi dị iche na omenala Ụka.
Saịtị na pọdkastị iji nyocha, kọwaa ma tụọ echiche banyere Chineke, Jizọs na Atọ n'Ime Otu.
Atọ n'Ime Otu YouTube ọwa
Njikọ Ndị Kraịst dị n'otu
Tọrọ ntọala na 2019, UCA bụ netwọkụ nyefere eziokwu nke otu Chukwu. Mgbe ha na -ejigide nkwenkwe dị iche iche na mpaghara ndị ọzọ, ndị otu UCA niile kwenyere na Chineke nke Akwụkwọ Nsọ bụ naanị Nna, na Jizọs bụ Mesaya ya bụ mmadụ. Ebumnuche nke UCA na ndị otu ya na-eto eto iji kwalite nkà mmụta okpukpe otu na ijikọ ndị kwere ekwe nwere otu echiche n'ofe ụwa niile.
Chọọchị Ndị Na -eso Ụzọ Ndị Kraịst n'ịntanetị
Mgbagwoju anya Atọ n'Ime Otu - Apologetics nke Nwanna Kel
Isiokwu ndị dị na saịtị a na -abụkarị maka ndị ọkà mmụta okpukpe Atọ n'Ime Otu na ndị na -arịọ mgbaghara, ma ọ bụ ndị chọrọ ka a gwa ha, ma ha bụ ndị ọkà mmụta okpukpe aka ọrụ na ndị ịrịọ mgbaghara ma ọ bụ na ha bụ ndị ọrụ ụbọchị niile. Mgbe amaghị ihe ma ọ bụ laissez-faire “Ndị kwere na Atọ n’Ime Otu” ga -achọta ozi bara uru nke ukwuu na ibe ndị a, ha abụghị ndị e bu n'obi. N'ikwu ya n'ụzọ ọzọ, ụfọdụ isi okwu na -anụ ọkụ n'obi nke m nwere ike ịgara '' ndị na -akwado Atọ n'Ime Otu '' abụghị maka gị naanị n'ihi na a kuziiri gị ikwere n'Atọ n'Ime Otu. Achọpụtara m na ọ na -ewute m nke ukwuu na ndị ọkà mmụta agụmakwụkwọ, ndị ọkà mmụta okpukpe, na ndị na -arịọ mgbaghara, mara ụfọdụ eziokwu gbasara okwu a ma ghara igosipụta ya ndị mmadụ kwa ụbọchị.
IWUZIZI NKE OZI ỌMA CHRISTIAN
Ebe maka nkà mmụta okpukpe, akụkọ ihe mere eme nke ụka, ịrịọ mgbaghara, mkpali, na nsogbu na njedebe ndị ọzọ
Ebe a na -ejikọ Akwụkwọ Nsọ nwere akụkọ dị iche iche lekwasịrị anya onye Chineke nke Akwụkwọ Nsọ bụ na onye Jizọs Kraịst bụ, na ihe ndụ ya na nkuzi ya gbasara ya.
Nchịkọta na-eto eto nke akụkọ nyocha miri emi na akụkọ ihe mere eme gbasara ozizi Atọ n'Ime Otu.
Emere webụsaịtị a mgbe Chineke duziri ya ịgbagha ozizi Atọ n'Ime Otu a ma ama site na ụtọ asụsụ na akụkọ ihe mere eme nke Akwụkwọ Nsọ.
Stanford Encyclopedia of Philosophy - Ntinye Atọ n'Ime Otu
Ngwa Atọ n'Ime Otu
Nnyocha Akwụkwọ Nsọ nke ozizi Atọ n'Ime Otu
Ụlọ ihe ubi nke Lord Lord
Lord Harvest International na -agba mbọ ịgba, ume na ịkwado ụka, ụmụaka na ezinụlọ maka alaeze Chineke.
Ịgbaso nkuzi nke ndị ozi n'akwụkwọ Ọrụ Ndịozi (Ọrụ 2:38, Ọrụ 8: 12-17, Ọrụ 10: 44-48, Ọrụ 19: 2-7) na Ndị Rom 6: 2-4. Nke a bụ saịtị ewepụtara maka nkuzi ndị Ozi nke akwụkwọ Ọrụ Ndịozi.
“Ihe anyị gụrụ n'akwụkwọ Ọrụ Ndịozi bụkwa maka taa nakwa na anyị kwesịrị ịlaghachi ndụ ndị na -eso ụzọ dị mfe Ndị Kraịst mbụ nwere. Ndozigharị Ikpeazụ bụ ndozigharị banyere ezi ozi ọma na ndụ onye na -eso ụzọ dị mfe, kamakwa mgbanwe nke ụka. ”
Ha na -eme baptism mmiri n'aha Jizọs.
Ikekwe otu ihe kacha dị mkpa na nkuzi ndị ozi bụ site n'okwu “Chineke mere ya ka ọ bụrụ Onyenwe anyị na Kraịst” na Ọrụ 2:36 ruo iwu Pita ka e mee ya baptizim n'aha Jizọs “Kraịst” na Ọrụ 2: 38. Okwu Grik a sụgharịrị ịbụ Kraịst bụ “Christos” na -ezo aka na onye e tere mmanụ. Pita kwuputara n'Ọrụ 10:38 na Chineke 'tere' Jizọs onye Nazaret mmanụ. Nye ndị ozi, Jizọs abụghị Chineke, kama ọ bụ Kraịst, onye Chineke tere mmanụ.
Ezi nkuzi nke ndị ozi n'isiakwụkwọ nke abụọ nke Ọrụ, yana na nguzozi nke Ọrụ Ndị Ozi, ahụghị otu oge nke ndị ozi na -akụziri ndị mmadụ na Jizọs bụ n'ezie Nna ma ọ bụ Chineke n'anụ ahụ. Yabụ, ka anyị bụrụ ndịozi n'ezie! Ka anyị kwusaara mba dị iche iche ozi ezi ozi zuru oke - ọ bụghị na Jizọs bụ Chineke Pụrụ Ime Ihe Niile - kama na ọ bụ onye Chineke mere “Onyenwe anyị na Kraịst”. “Jesus” edi Messiah!
Ụlọ elu dị elu, TN
Nzaghachi anyị nye Chineke site na Jizọs Kraịst bụ ichegharị (nwee mgbanwe nke uche) wee kwere ozi ọma (Mak 1:15), kwupụta okwukwe anyị, mee baptizim n'ime mmiri site na nmikpu n'ime mmiri n'aha Jizọs wee nata mmụọ nke Chineke. Pita onyeozi kwuru:
Chegharịa, ka e meekwa onye ọ bụla n'ime unu baptizim n'aha Jizọs Kraịst maka mgbaghara mmehie unu; ị ga -anata onyinye nke Mmụọ Nsọ (Ọlụ Ndịozi 2:38).
Ọbịbịa ka ọ bụrụ “nime Kraịst” na -eme ka mmadụ bụrụ onye so na ọgbụgba ndụ ọhụrụ nke Chineke (Hib. 13:20, 21). N'ime ọgbụgba ndụ a, Jizọs bụ onye ogbugbo anyị na Chineke (1 Tim. 2: 5), onye ndu anyị - onye isi anyị (1 Kọr. 11: 3). N'ime ọgbụgba ndụ ọhụrụ, Jizọs bụ onye nkuzi anyị, a ga-ekpekwa anyị ikpe n'okwu ya (Jọn 12: 48-50).
Churchka Bible Lakeshore, Temple AZ
Nzaghachi mmadụ nye Chineke site n'aka Jizọs Kraịst ga-abụ nkwenye n'ozi ọma, nkwupụta okwukwe, ime baptizim site n'imikpu n'ime mmiri n'aha Jizọs, na ito eto na ndụ Ndị Kraịst (Ndị Rom 6: 4-6; Ọrụ 2:38).
Okwu ikpe megide Q
Ngwọta ọkọlọtọ maka nsogbu Synoptic na -eche na Matiu na Luk ji nnwere onwe mee ọ bụghị naanị nke Mark kamakwa ebe ọzọ, ugbu a furu efu, nke a na -akpọ 'Q'. Ma n'ime Okwu ikpe megide Q Mark Goodacre na -ejikọ nkwenye siri ike nke Ibu ụzọ Markan na nlebara anya na nkọwa zuru ezu banyere echiche Q, na -enye echiche ọhụrụ na akaebe na -esite ọ bụghị naanị site na usoro ọdịnala kamakwa site na usoro mmụta nke oge a.
Enwere ike ikwu na enigma edemede kacha ukwuu n'akụkọ ihe mere eme, Nsogbu Synoptic akpaliwo mmasị n'ọgbọ nke ndị ọkà mmụta ndị gbagwojuru anya na nkwekọrịta, nghọtahie, ọdịiche, na ihe dị iche iche nke mmekọrịta dị n'etiti atọ mbụ nke Oziọma akwụkwọ nsọ anyị. N'agbanyeghị nsogbu Synoptic ka ụmụ akwụkwọ na -enweghị ike iru, n'oge na -adịghị anya, ọ gbanyere na mgbagwoju anya ya. Mana ugbu a Mark Goodacre na -enye ụzọ site na oke maze, na nkwa nke mpụta na njedebe, na -akọwa n'ụzọ na -enye ume ọhụrụ ma na -enye ume ọhụrụ ihe ọmụmụ Nsogbu Synoptic gụnyere, ihe kpatara o ji dị mkpa yana otu esi edozi ya. Nke a bụ ntuziaka a na-agụ agụ, nke ziri ezi na nke ọhụrụ, dị mma maka ụmụ akwụkwọ na-agụghị akwụkwọ na onye na-agụkarị.
NTcanon.com - Ndozigharị Ndozi nke Akwụkwọ Agba Ọhụrụ